Entertainment – XB Media Myanmar
October 10, 2021 Bestie_Author
ဖစျေ့ဘုတျဆယျလီနဆေနျး ကတော့ ..သူမြားနဲ့မတူ တမူထူးခွားတဲ့..ဟာသလေးတှေ တငျဆကျရငျး လူသိမြားလာခဲ့တဲ့သူ တဈယောကျပဲဖွဈ ပါတယျ။..လှပတဲ့မကျြနှာ အမူအရာ အပွောအဆိုတှကွေောငျ့ လူအမြားရဲ့အားပေးမှုကို… ပိုငျဆိုငျထားသူ တဈယောကျ ပဲဖွဈပါတယျ။ ..ထို့ ပွငျ နဆေနျးကပရိသတျတှေ အားပေးမှုကွောငျ့ ..ရရှိလာခဲ့တဲ့ ဝငျငှမြေားဖွငျ့ ..သိနျးထောငျခြီ တနျသောအိမျကောငျးကောငျးမှနျမှနျ.. ဆောကျလုပျ… နထေိုငျလာနိုငျလာခဲ့ပါတယျ နဆေနျးက.. လကျရှိမှာတော့ ..သူဝါသနာပါတဲ့ အလုပျတှေ ကိုလုပျကိုငျရငျး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိကာ.. အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိဆှတျခူးနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။ နဆေနျးကလညျး သူ့ရဲ့ အလုပျကို.. အာဏာသိမျးခံထားရ ခြိနျတောငျမှ . ဂရုမစိုကျပဲ အလုပျတှေ ဆကျလကျ လုပျဆောငျနေ တာကွောငျ့ ပွညျသူမြားရဲ့ …အပွဈတငျ ဝဖေနျမှုကိုလဲ.. အပွငျးအထနျ ခံနရေပါတယျ… အဲဒီနောကျပိုငျး မှာတော့ နဆေနျးက ဘယျဘကျကိုမှ ရဲရဲဝ ငျ့ ဝငျ့ ရပျတညျလာခွငျးမရှိတာကွောငျ့… နဆေနျးနှငျ့ ပတျသတျသညျ့ ကွျောငွာမြား ရိုကျကူးထားသညျ့ လုပျငနျးရှငျမြားက နဆေနျးနဲ့ ပကျ သကျတဲ့ လုပျငနျးမြားကို ရပျဆိုငျးပဈရတဲ့ အထိ ဝဖေနျခံခဲ့ရပါသေးတယျ။အဲနောကျပိုငျးမှာတော့ နဆေနျးက ပရိသတျမြားအပျေါမထိမဲ့မွငျ ရေးသားခကျြတှကွေောငျ့ အပွငျး အထနျဝဖေနျခံရပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ နဆေနျးတဈယောကျ ပရိသတျတှကေို ပွနျလညျတောငျးပနျစာ ရေးသားလာ ခဲ့ပါတယျ။…
ခဈြရတဲ့မိသားစုလေးအတှကျ ကိုယျ တိုငျမီးဖိုခြောငျဝငျပွီး စားဖိုမှူးလုပျ ကာ ခကျြပွုတျနတေဲ့ Rဇာနညျ
September 20, 2020 Bestie_Author
သာယာလှပတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အဆိုတျော Rဇာနညျကတော့ လကျရှိမှာဆို ရငျ မိသားစုနဲ့အတူ အေးအေးခမျြးခမျြးနထေိုငျနတောဖွဈပါတယျ။Rဇာနညျရဲ့ မိသားစုဘဝလေး ကို ပရိသတျတှကေလညျး အားကပြွီး ခဈြနရေတာဖွဈပါတယျ။Rဇာနညျကတော့ပါရမီဖွညျ့ဖကျ ကောငျးပီသတဲ့ ခဈြဇနီးလေးကိုလညျး အမွဲတမျးကွငျနာယုယပွီး ဂရုစိုကျပေးနတောဖွဈပါ တယျ နျော။ Rဇာနညျရဲ့ ကလေးသုံးယောကျလုံးကလညျး ခဈြစရာကောငျးကွလို့ လူခဈြလူခငျပေါမြားနေ တာဖွဈပါတယျ။သမီးအငယျဆုံးလေး မဈမဈတုနျကတော့ ဖဖေေRဇာနညျနဲ့တူပွီး မကျြလုံး ဝိုငျးဝိုငျး၊ပါးဖောငျးဖောငျးလေးတှလေညျး ရှိတာကွောငျ့ (၄)လအရှယျလေးနဲ့တငျ အရမျးခဈြဖို့ ကောငျးနတောဖွဈပါတယျ။Rဇာနညျတို့ဇနီးမောငျနှံကတော့ သားသမီးသုံးယောကျလုံးကို ဂရုစို ကျပွီး ပွုစုပြိုးထောငျနကွေတာပါနျော။ Rဇာနညျကလညျး အားလပျခြိနျတိုငျးကို မိသားစုအတှကျသာ ကုနျဆုံးပွီး ပြျောရှငျစရာတှဖေနျတီး ပေး နတောဖွဈပါတယျ။မနကေ့ဆိုရငျလညျး Rဇာနညျက ကလေးသုံးယောကျနဲ့အတူ ပြျောပြျော ပါးပါးရကေစားပေးပွီး ဒီနေ့ တနင်ျဂနှနေလေ့ေးမှာလညျး ကိုယျတိုငျမီးဖိုခြောငျဝငျကာခကျြပွုတျ နတော ဖွဈပါတယျ။အိမျထောငျဦးစီးကောငျးပီသစှာနဲ့ အိမျအလုပျတှကေို ကူညီလုပျကိုငျ ပေး နတေဲ့ Rဇာနညျရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ Source&Photo Credit: Zarni Myonyunt’s Facebook Account Video Credit: Zarni Myonyunt’s Facebook Account [Zawgyi] သာယာလှပတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော် Rဇာနည်ကတော့ လက်ရှိမှာဆို ရင် မိ သား…
အနုပညာရှငျမောငျနှမတှဖွေဈတဲ့ မမွေငျ့မိုလျနဲ့အတူ Music Video လေးတဈပုဒျကိုရိုကျကူးနတေဲ့ အော ငျ ရခေမျြး
July 30, 2020 Bestie_Author
MRTV-4 ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲကနေ ပရိသတျအားပေးမှုကိုစတငျရရှိခဲ့သူတဈယောကျဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျအောငျရခေမျြးကိုတော့ပရိသတျကွီးလညျးရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျထငျပါတယျ။ သူကတော့သရုပျဆောငျတဲ့နရောမှာဇာတျရုပျရဲ့ကာရိုကျတာအတိုငျး အံဝငျဂှငျကဖြွဈအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျတာကွောငျ့ အခြိနျတိုအတှငျးမှာပဲပရိသတျအားပေးမှုကိုအခိုငျအ မာရရှိခဲ့ တာဖွဈပါတယျ။ ယခုနောကျပိုငျးမှာတော့အောငျရခေမျြးဟာ ရုပျရှငျဇာတျကားတှမှောလညျးဝါရငျ့အ နုပညာ ရှငျ တှနေဲ့ အတူပါဝငျသရုပျဆောငျနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။ လတျတလောမှာလညျးသူဟာအနုပ ညာအလုပျတှကေိုဆကျတိုကျလုပျကိုငျနပွေီး ပွီးခဲ့တဲ့ဇူလိုငျလ(၂၉)ရကျနေတေု့နျးကလညျး အနုပညာရှငျမောငျနှမတှဖွေဈတဲ့ပုရိသတှရေဲ့အသညျးကြျောလေးမမွေငျ့မိုလျနဲ့အတူ Music Videoလေးတဈပုဒျကိုရိုကျကူးနတေယျလို့သိရပါတယျ။ အဲဒီအကွောငျးနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ အောငျရခေမျြးက “မနကေ့သီခငျြးလေး Music Video ရိုကျနကွေောငျးသတငျးပို့တာပါ ကိုကွီးဘာလုပျလုပျအသိပေးတာနျော ”ဆိုပွီးရိုကျကှငျးနော ကျကှယျကပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျမှာဖျောပွထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါ ပုံရိပျလေးတှကေိုတော့ပရိသတျကွီးအတှကျပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ Source:Aung Yay Chan [zawgyi] MRTV-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုကိုစတင်ရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်အောင်ရေချမ်းကိုတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူ ကတော့သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဇာတ်ရုပ်ရဲ့ကာရိုက်တာအတိုင်း အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်အောင် သရုပ်ေ ဆာင်နိုင်တာကြောင့် အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အ မာရရှိခဲ့ တြာ ဖစ်ပါတယ်။ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အောင်ရေချမ်းဟာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်းဝါရင့်အ နုပညာ ရှင် တွေနဲ့ အတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်းသူဟာအနုပ ညာအ လုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ(၂၉)ရက်နေ့တုန်းကလည်း အနုပညာ ရှင်မောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့ပုရိသတွေရဲ့အသည်းကျော်လေးမေမြင့်မိုလ်နဲ့အတူ Music Videoလေး တစ်ပုဒ်ကိုရိုက်ကူးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အောင်ရေချမ်းက “မနေ့ကသီချင်းလေး Music Video ရိုက်နေကြောင်းသတင်းပို့တာပါ ကိုကြီးဘာလုပ်လုပ်အသိပေးတာနော် ”ဆိုပြီးရိုက်ကွင်းနော က်ကွယ်ကပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source:Aung Yay…
နားရကျမှာ ကလေးလုပျသားခဈြ မငျး ထကျနဲ့ မိမိ မိသားစုဝငျတှကေို တှေ့ ဆုံပေးခဲ့တဲ့ ဂြှနျလှငျ
နိုငျငံကြျောအနုပညာရှငျတှကေို မှေးထုတျပေးနတေဲ့ Star& Model International အဂေငျြစီရဲ့ ဦးဆောငျသူ ဂြှနျလှငျကတော့ နားရကျမှာ ကလေးလုပျသားခဈြမငျးထကျနဲ့ မိမိ မိသားစုဝငျတှကေို တှဆေုံ့ပေးခဲ့တဲ့အကွောငျးကို “Sunday family time with my lovely mother / relatives/friends ခဈြမငျးထကျ #အကွငျနာတရားထှနျးကားရေး” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာဖျောပွထားပါတယျ။ စိတျသဘောထားပွညျ့ဝလှနျးလှတဲ့ ဂြှနျလှငျကတော့ မကွာခဏဆိုသလိုလညျး အကူအညီ လိုအငျနတေဲ့ သူတှကေိုလညျး တကျစှမျးသလောကျကူညီပေးလေ့ ရှိပါသေးတယျ။ သူက တော့ မိဘတှကေို ပွနျလညျထောကျပံ့ပေးဖို့အလုပျလုပျနရေငျး အလုပျခှငျမှာ လကျ(၃) ခြောငျးပွတျသှားခဲ့တာတောငျ ကွိုးစားအလုပျလုပျနသေေးတဲ့ ကလေးလုပျသား ခဈြမငျးထ ကျ အတှကျတဈယောကျ ဘဝရပျတညျရေးအတှကျ အလုပျအကိုငျတခု စတငျတဲ့အခါလို အပျမယျ့ စကျပွငျသငျတနျးကြောငျး တကျခှငျ့ရ အောငျလညျး စီစဉျဆောငျရှကျပေးခဲ့ပါ သေးတယျ။ဂြှနျလှငျကတော့ ခဈြမငျးထကျရဲ့ အမေ ဈေးရောငျးဖို့အတှကျနဲ့ အဖဆေ့ေးဖိုး အသုံးစရိတျအတှကျ အလှူငှေ(၂)သိနျးကိုလညျး လှူဒါနျးပေးကာ လစဉျထောကျပံ့ဖို့အတှ ကျနဲ့ လိုအပျတာတှကေိုလဲ ဆကျလကျ ကူညီ ပေး သှားဦးမှာဖွဈတယျလို့လညျး သိရှိရပါ တယျ။ CeleGabar ပရိသတျကွီးရေ စိတျသဘောပွညျ့ဝလှနျးတဲ့ ဂြှနျလှငျကတော့ သူထောကျပံ့ ပေးနတေဲ့ ကလေးလုပျသားခဈြမငျးထကျကို မိသားစုဝငျတဈယောကျလိုသဘောထားကာ…
December 23, 2019 Bestie_Author
အခုခေတ် ချစ်သူကောင်လေးတွေအနေနဲ့ မဖြစ်မနေတတ်မြောက်ထားသင့်တဲ့ ပညာရပ်ကေ တာ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်နီးပါး ဓာတ်ပုံကျွမ်းကျင်စွာရိုက်ကူးတတ်ဖို့ပါပဲ။ ချစ်သူေ ကာ င်မလေးနဲ့ အပြင်သွားတဲ့အခါ (ဒါမှမဟုတ်) ခရီးသွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ကိုယ့်ကောင်မေ လး ရဲ့ အလှပုံရိပ်၊ အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကို ချစ်သူရဲ့စိတ်တိုင်းကျရိုက်ကူးပေးနိုင်ဖို့က ကောင်ေ လးေ တွရဲ့ တာဝန်တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါပြီ။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ချစ်သူမိန်းကလေးအတွက် ဆိုရင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံဆရာလည်းဖြစ်သွားတတ်ကြတဲ့ နာမည်ကြီးထိုင်းသရုပ်ေ ဆာင် မင်းသားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ရှုစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ 1. Nadech Kugimiya Nadech ဟာဆိုရင် သူ့ရဲ့ချစ်သူ Yaya Urassaya နဲ့ ခရီးတွေသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာ ချစ်သူရဲ့ အမှတ်တရအလှပုံရိပ်တွေကို သူကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးပေးတတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ 2. Mark Prin နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Mark Prin ဟာဆိုရင်လည်း ချစ်သူ Kimmy နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါတိုင်းမှာ ချစ်ရသူရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို လှပကောင်းမွန်စွာရိုက်ကူးပေးတတ်သူဖြစ်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်အကောင့်တွေကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေ အတွက် မျှဝေပေးလေ့ရှိပါတယ်။ 3. Alek Teeradetch Alek ကလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရတာကို ၀ါဿနာပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ချစ်သူ Toey Jarinporn နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါတိုင်းမှာ ချစ်သူရဲ့ပုံရိပ်တွေကို အနည်းဆုံးတစ်ပုံလောက်တော့…
ပရိသတျတှေ နှဈပေါငျးမြားစှာ စောငျ့မြှျောနကွေတဲ့ “အောငျဆနျး” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး ကတော့ အခုဆိုရငျ စတငျပုံဖျောနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။ “အောငျဆနျး” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကို ဒါရိုကျတာ လူမငျးက ဦးဆောငျရိုကျကူးပုံဖျောမှာဖွဈပွီး ဝါရငျ့သရုပျဆောငျတှနေဲ့အတူတူ သရုပျဆောငျသဈမြားစှာက သရုပျဆောငျသှားကွမှာ ဖွဈပါတယျ။ “အောငျဆနျး” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကို စကျတငျဘာလ (၃၀) ရကျနကေ့ စတငျရိုကျကူးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနေ့ အောကျတိုဘာလ (၃)ရကျနမှေ့ာတော့ “အောငျဆနျး” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး ရိုကျကှငျး ဒုတိယနဖွေ့ဈပါတယျ။ “အောငျဆနျး” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး ရိုကျကှငျး ဒုတိယနကေို့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ပဲခူးဆောငျမှာ ရိုကျကူးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ပဲခူးဆောငျမှာ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးရဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသားဘဝ ဇာတျဝငျခနျးတှကေို ရိုကျကူးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မိုမိုလေးပရိသတျတှအေတှကျ “အောငျဆနျး” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး ရိုကျကှငျးပျေါက မွငျကှငျးတှကေို မြှဝလေိုကျပါတယျနျော။ အောငျဆနျးရုပျရှငျကို ရနျကုနျ၊ မန်တလေးနဲ့နတျမောကျမွို့တှကေ သမိုငျးဝငျနရောတှမှော စတငျရိုကျကူးတော့မှာဖွဈပွီး ရနျကုနျမွို့ရှိ အမြိူးသားပွတိုကျက သီဟာသနပလ်လငျအပါအဝငျ မန်တလေးရှိ မွနနျးစံကြျောရှနေနျးတျော၊ အငျးဝရှိ ဆငျကြုံးခံတပျ၊ ဗားဂရာကြောငျး၊ မယျနုအုတျေ ကြာငျးနဲ့ နတျမောကျမွို့က ဗိုလျခြုပျနအေိမျတှမှော ရိုကျကူးသှားမှာ ဖွဈမယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါရိုကျတာ လူမငျးနဲ့တကှ “အောငျဆနျး” ရုပျရှငျအဖှဲ့သားတဈခုလုံးက တကျညီလကျညီနဲ့ ကွိုးစားနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။…
သိန်း၂သောင်းတန်စိန်ခေါ်ပွဲနဲ့ အချစ်အားပြိုင်ပွဲတို့ကို မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုရမယ့် အယူတော်မင်္ဂလာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
ကဲ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုမှ ကြည့်ရှု ချင်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ လာမယ့် June လ (၆) ရက်နေ့မှာတော့ အားလုံးက စောင့်မျှော်နေခဲ့ရတဲ့ ” အယူတော် မင်္ဂလာ ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက ရုံတင်ပြသတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကြီးမှာတော့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ရန်အောင်၊ မြင့်မြတ်၊ ခင်လှိုင်၊ နန်းဆုဦး၊ ပိုးအိအိခန့် ၊ ထားထက်ထက် စတဲ့ အနုပညာရှင်တွေက မထင်မှတ်ထားလောက်တဲ့ အိုက်တင်တွေနဲ့ အကောင်းဆုံး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်တွေ့နေကျပုံစံမျိုးနဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ ဇာတ်အိမ်ဇာတ်ကွက်တွေကို ရှုစားရမယ့် ဒီဇာတ်ကားကြီးကတော့ အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီဇာတ်ကားကြီးမှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ရယ်မောပျော်ရွှင်မှုတွေ ၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ လျှိုဝှက်ချက်တွေစတဲ့ ရသအစုံအလင်ကို မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုရအောင် ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြကွက်တိုင်းကို မျက်တောင်မခတ်တိုင်း ကြည့်ရူနေရလောက်အောင်ကို ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်က အထူးခြားဆုံး ဖန်တီးတင်ဆက်ပေးထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကြမ္မာကို အကောင်းချည်းသက်သက်ဖြစ်ဖို့ အယူတော်မင်္ဂလာအရ အစီအရင်တွေနဲ့ စီမံပြောင်းလဲတတ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သူဌေးကြီး Mr.Yes ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတရားလောင်းကြေးထပ်သည့် စိန်ခေါ်ပွဲကြီးမှာ ဝင်နွှဲမယ့်သူ (၇) ဦးတိတိ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသိန်း၂သောင်းတန် စိန်ခေါ်ပွဲကြီးနဲ့အတူ…
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ဘာအဝတ်အစားမှမဝတ်ဘဲ ဆေးစက်လေးတွေပဲရေးစွဲကာ Show ပွဲကို ပိုမိုအသက်ဝင်အောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်နှစ်ယောက်
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Chelsea Flower Show မှာတော့ မိန်းမလှလေးနှစ်ဦးပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။သူမတို့နှစ်ဦးကတော့ nude model တွေဖြစ်ပြီး show မှာ ပြုလုပ်လာတဲ့ သူမတို့ရဲ့ design တွေကြောင့် လူအများရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမတို့နှစ်ဦးပြုလုပ်တာတဲ့ design ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်လာမယ့်အစား ပန်းပွင့်လေးတွေကို ဆေးနဲ့ ရေးဆွဲပြီး အဝတ်မပါတဲ့ပုံစံနဲ့ တက်ရောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အဝတ်အစားမပါဘဲ ဆေးစက်တွေသာ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖက်ရှင်ဟာဆိုရင်လည်း ထိုပွဲကြီးကိုလာရောက်သူတွေရဲ့ မျက်လုံးတွေကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ချယ်ထားတဲ့ ဆေးလေးတွေဟာလည်း အသက်ဝင်လှပလှသလို သူမတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုပါ ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လွင်နေစေတာကြောင့် ဒီပုံလေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေရော ဒီပုံလေးတွေကြည့်ပြီး Chelsea Flower Show ကိုပိုမိုအသက်ဝင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ သူမတို့နှစ်ဦးကို ကြွေသွားကြပြီလား။ အခုလိုသတင်းထူးတွေ သို့မဟုတ် စာတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ အမြဲဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် သတင်းတစ်ပုဒ်အပြီးမှာ XB Media Myanmar ဆိုပြီးပေါ်လာရင် Like ဆိုတဲ့စာသားလေးကို နှိပ်ခဲ့ပေးပေါ။ XB Media Myanmar ကိုအားပေးတဲ့ စာဖတ်သူအပေါင်းကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်ကြီး သဘောကျနှစ်သက်ခဲ့ရင် (Share)မျှဝေပေးခဲ့ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ source –…
PUBG player တွေကြား အထူးရေပန်းစားနေတဲ့ အလန်ဝေါ်ကာရဲ့ On My Way သီချင်း
ယနေ့ ခေတ် လူငယ်တော်တော်များများဟာ အလုပ်တွေပိ၊ ကျောင်းစာတွေပိပြီး Stress တွေများနေတဲ့အခါမျိုးမှာ စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာဖို့ အတွက် သီးသန့် ဝါသနာတစ်မျိုးစီရှိကြတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ စိတ်အပန်းပြေဖို့ အတွက် လူငယ်တွေဟာ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ ဂိမ်းကစားခြင်းတို့ ကို ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပြီး အထူးသဖြင့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ ဂိမ်းဆော့တာကို လူကြီး၊လူငယ်မရွေး ပြုလုပ်လာကြတာတွေ့ ရပါတယ်။ လူငယ်တွေနဲ့ လူလတ်ပိုင်းတွေကြားမှာ ရေပန်းအစားဆုံး Mobile game တွေကတော့ PUBG, Mobile Legends, Cyber Hunter … စတဲ့ shooting game/ adventure game အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပြီး PUBG game ကတော့ Graphic အကောင်းဆုံးနဲ့ ဆော့ကစားနိုင်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တွေကြားမှာတော့ ရေပန်းအစားဆုံး Mobile game လို့ ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။ PUBG game ရဲ့ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ ခေတ်စားနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး Collaboration လုပ်လေ့ရှိတာကြောင့်ပါပဲ၊ ယခုဆိုရင်လည်း PUBG game ဟာ မကြာခင်မှာရုံတင်ပြသတော့မယ့် Gozilla ရုပ်ရှင်နဲ့ collaboration လုပ်ထားတဲ့ feature တစ်ချို့ ကိုလည်း…
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချထားကြတဲ့ နာမည်ကြီးကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေထဲမှာ အခုဖော်ပြပေးချင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကတော့ ၀ိတ်ချတဲ့နေရာမှာ ဆရာတင်ရလောက်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေနဲ့ ၀ိတ်မချခင်ပုံတွေနဲ့ ၀ိတ်ချပြီးပုံတွေကို ယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အတော်လေးကို ကွာခြားနေတာကိုတွေ့ရပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ ပြောင်းလဲသွားမှုတွေကို ချီးကျူးထားခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ၀ိတ်ချတဲ့နေရာမှာ ဆရာတင်ရလောက်အောင် ဘယ်လိုမျိုးသော ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဘယ်သူတွေက ရရှိခဲ့ကြသလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ရှုစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ 1. Park Boram “Super Star K” ကနေတဆင့် လူသိများလာခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မလေး Park Boram ရဲ့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစားကတော့ တကယ်ကို အံ့သြမင်တက်စရာပါပဲ။ 2. Kwon Mijin ဟာသမယ်ဖြစ်တဲ့ Kwon Mijin ကတော့ သူမရဲ့ ၀၀ဖိုင့်ဖိုင့်ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို ပိန်သွယ်လျတဲ့ ကိုယ်အချိုးအစားအဖြစ်ရောက်ရှိအောင် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သူုဖြစ်ပါတယ်။ သူမ လျှော့ချနိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကတော့ ၅၃ ကီလိုဂရမ် (၁၁၇ ပေါင်) ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ 3. Sulli SM ရဲ့ အလှပဂေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sulli ဟာလည်း သူမရဲ့ ခပ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ 4. Red Velvet’s Wendy စတင်ပွဲမထွက်ခင်တုန်းက ခပ်၀၀ဖြစ်နေတဲ့…